Allgedo.com » Hay’adda Human Rights Watch oo ku Eedeeysay xoogagga Taabacsan DKMG ah iyo Xarkada Al-shabab inay dad xukun la’aan iska dileen
Hay’adda Human Rights Watch oo ku Eedeeysay xoogagga Taabacsan DKMG ah iyo Xarkada Al-shabab inay dad xukun la’aan iska dileen
Print here| By: allgedo.com: Friday, March 30, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Muqdisho, Somalia (AOL) – Hay’adda u doodad xuquuqul Insaanka ee Human Rights Watch ayaa ku eedeeysay ciidamada taabacsan dowladda KMG iyo Xarakada Al-shabaab in ay ku kacaan falal ka baxsan biniaadanimada, iyadoona ay hay’addu sheegtay in xadgudubyadii ugu danbeeyay ay ka dhaceen magaalooyinka Beledweyne iyo Baydhabo oo dhawaan ay qabsadeen ciidamo taabacsan dowladda KMG iyagoo kaashanaya ciidamada Ethiopia.
Hay’adda ayaa ugu baaqday masuuliyiinta Somalia inay qaadaan talaabo deg deg ah oo lagu joojinayo gabood falada lagu kacayo, isla markaana lala xisaabtamo kuwa masuulka ka ah.
Ha’adda, oo soo xiganeysa xog-wareeysiyo ay la yeelatay dadka rayidka ah ee magaalooyinkaasi ku nool, ayaa sheegay in tan iyo markii magaalooyinkaasi laga qabsaday Al-Shabab ay xaaladda amaanka sii xumaaneysay.
Dad ay hay’adu wareysatay oo ku sugan Baydhabo iyo Beledweyne ayaa sheegay inay filayeen in marka Al-shabab meesha laga saaro ay xaaladooda amaan wax weyn iska bedeli doonto hase yeeshee aysan taasi dhicin.
Leslie Lefkow, oo ah ku xigeenka agaasimaha hay’adda Human Rights Watch ee Africa ayaa sheegtay in Dadka rayidka ah ee ku nool labadaasi magaalo ay filayaan, in hanjabaadaha, cabsida, iyo cadaadiska ay Al-shabab ku heysay ay meesha ka baxayaan, balse bey tiri arintu ay noqotay, in kuwo wax dhibaateynayay ay un bedeleen kuwo kale oo la mid ah.
Hay’addu waxey sheegtay inay la hadashay ehelada iyo dad goob joog u ahaa ilaa iyo todoba qof oo lagu dilay magaalada Beledweyne oo ay dileen Maleeshiyaadka Ahlu-sunna, iyo kuwa Isbaheysiga dooxadda Shabeele ee magaalada la soo galay Ciidmada Ethiopia, oo ka jawaabayay weeraro ay ku soo qaadeen Al-shabab. Sidoo kale waxey ku eedeysay maleeshiyaadka jir dil iyo tacadiyo kale oo ka dhan ah xuquuqul insaanka.
Hay’adda ayaa sidoo kale ku eedeysay kooxda Al-shabab dilka laba qof oo rayid ah oo ka dhacay magaalada Baydhaba 25kii Febryary iyo 11kii bishan March.
Sidoo kale waxey sheegtay in ciidamad dowladda oo ka Jawaabayay bam gacmeed lagu soo tuuray suuqa baydhaba ay rasaas aan loo aaba yeelin ku dileen ugu yaraan lix qof oo rayid ah 21kii bishan.
C/qani Max’ed Bayoow, Muqdisho/Somalia.